मुम्बईले दियो केकेआरलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, पोलार्डको उत्कृष्ट फिनिसिङ
खबर बाेर्ड प्रकाशित चैत्र २३, २०७८
भारतमा जारी इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १४ औं खेलमा मुम्बई इण्डियन्सले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) लाई १६२ रनको लक्ष्य दिएको छ । पुणेस्थित महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १६१ रन बनायो ।
उसका लागि सूर्यकुमार यादवले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ३६ बलमा पाँच चौका र दुई छक्काको सहयोगमा ५२ रन बनाए । अघिल्लो दुई खेलमा विश्राम पाएका सूर्यले सिजनको पहिलो खेलमै शानदार प्रदर्शन गरे ।
कस्तो रह्यो ‘बेबी एबी’को डेब्यू?
‘बेबी एबी डिभिलियर्स’को नामले चर्चित डेवाल्ड ब्रेभिसले पहिलो खेलमै प्रभावित पार्ने पारी खेले । तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङमा आएको उनले आक्रामक तरिकाले सुरुवात गरे । डेवाल्डले दोस्रो बलको सामना गर्दै ३.१ ओभरमा आजै डेब्यू गरेका रसिक सलामको बलमा चौका हिर्काए ।
उनले ३.४ ओभरमा लयमा देशका उमेश यादवको बलमा उत्कृष्ट चौका प्रहार गरे । डेवाल्डले ५.६ ओभरमा विश्वका स्टार बलर प्याट कमिन्सको बलमा शानदार छक्का हिर्काए । त्यस्तै, उनले ७.१ ओभरमा वरुण चक्रवर्तीको बलमा छक्का हिर्काउँदै समर्थकमा उत्सा थपे । तर, डेवाल्ड यही ओभरमा साम बिलिङसबाट पाँचौं बलमा स्टम्पिङ आउट भए ।
शर्मा फेल वर्मा पास !
आजको खेलमा पनि कप्तान रोहित शर्माले निराश बनाए । ‘हिटम्यान’को परिचय बनाएका उनी आज भने फिट भएनन् । रोहितले १२ बलको सामना गर्दा ३ रन मात्र जोड्न सके । उनी अघिल्लो दुई खेलमा क्रमशः ४१ र १० रन बनाएका थिए ।
मुम्बईका युवा ब्याटर तिलक वर्माले भने आज पनि राम्रो पारी खेले । उनले केकेआरविरुद्ध २७ बलमा तीन चौका र दुई छक्कासहित अविजित ३८ रनको योगदान दिए । तिलकले पहिलोमा २२ र दोस्रो खेलमा ३३ बलमा ६१ रनको आक्रामक पारी खेलेका थिए ।
इशान पनि फेल
केकेआरका बलरसामु युवा आक्रामक ब्याटर इशान किशन पनि पास हुन सकेनन् । उनले २१ बलमा एक चौकाको सहयोगमा केवल १४ रन मात्र जोड्न सके । इशानले अघिल्लो खेलमा दिल्लीविरुद्ध अविजित ८१ र राजस्थानविरुद्ध ५४ रन बनाएका थिए ।
पोलार्डको उत्कृष्ट फिनिसिङ
विश्व क्रिकेटका आक्रामक ब्याटर किरण पोलार्डले आज भने आफ्नो पावर देखाए । अघिल्लो खेलमा निकै निराश बनाएका उनले केकेआरविरुद्ध ५ बलमा ३ छक्कासहित अविजित २२ रनको आक्रामक पारी खेले ।
पोलार्डले अन्तिम ओभरमा प्याट कमिन्सको बलमा ३ छक्कासहित २३ रन बनाए । अघिल्लो दुई खेलमा उनी क्रमशः ३ र २२ रनमा आउट भएका थिए । केकेआरका लागि प्याट कमिन्सले दुई, वरुण चक्रवर्ती र उमेश यादवले एक/एक विकेट लिए ।
जारी लिगमा केकेआरले तीन म्याच खेल्दा दुईमा जित र एक खेलमा हार बेहोरेको छ । मुम्बईले भने २ म्याच खेल्दा दुवैमा हारको सामना गरेको छ । हालसम्म केकेआरले दुई र मुम्बईले सर्वाधिक ५ पटक आईपीएल उपाधि जितेका छन् ।
मुम्बईको प्लेइङ–११ : रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, किरोन पोलार्ड, डेवाल्ड ब्रेभिस, डानियल साम्स, मुर्गन आश्विन, टिमल मिल्स, बासिल थम्पी र जसप्रित बुमराह ।
कोलकाताको प्लेइङ–११ : अजिंक्य रहाणे, वैंकटेस अय्यर, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नितिश राणा, साम बिलिङ्स (विकेटकिपर), आन्द्रे रसेल, सुनिल नारायण, प्याट कमिन्स, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती र रसिक सलाम ।
जाँदाजाँदै केएल राहुलले बनाए कीर्तिमान, तोडे गेलसहित दुई स्टारको ठूलो रेकर्ड
क्यानले ईपीएल आयोजना गर्न स्वीकृति नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर
बंगलादेशविरुद्ध श्रीलंकाले बनायो ५०६ रन, म्याथ्यूज र चन्डिमलले खेले शतकीय पारी